Tag: moneyball movie | Martech Zone
Tag: ego nkiri
Akwụkwọ Onye Ọ bụla Na-enyocha Ọchịchị Ga-agụ
Mọnde, Jenụwarị 23, 2012 Mọnde, Jenụwarị 23, 2012 Douglas Karr
Afọ ole na ole gara aga ezigbo enyi m Pat Coyle, onye nwere ụlọ ọrụ na-ere ahịa egwuregwu, gbara m ume ịgụ Moneyball. Maka otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ, anaghị m etinye akwụkwọ ahụ na listi ọgụgụ m. Izu ole na ole gara aga, m lere ihe nkiri ahụ wee nye iwu akwụkwọ ozugbo ka m nwee ike igwu n'ime akụkọ ahụ. Adịghị m onye egwuregwu… ị nwere ike ọ bụghị. Anaghị m enwekarị ọ getụ na kọleji ma ọ bụ ọkachamara ọ bụla